रोमी सेन्टुरियन र बाइबलकालीन समयको ऐना | के तपाईंलाई थाह थियो?
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उङ्गाबेरे उम्बुन्डु एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओसेसियन कम्बोडियन काजाक किकाओन्डे किकाम्बा किकुयु किकोंगो किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरून्डी किर्गिज कोंगो क्याटालान क्रोएसियन क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गून ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापटेक (इस्मस) जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टुभालुअन डच डेनिश ड्रेहु ताहिटी तोक पिसिन तोतोनक त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली न्यानेका पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज मले माया मालागासी मूर म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुभेल वलिसियन शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिब्रू हिलिगेनोन
रोमी सेनामा सेन्टुरियनको भूमिका के थियो?
सेन्टुरियनको मूर्ति मार्कुस फाभोनियस फासिलिस
बाइबलको ख्रीष्टियन ग्रीक धर्मशास्त्रमा सेन्टुरियनबारे केही पटक उल्लेख गरिएको पाइन्छ। येशूलाई मृत्युदण्ड दिइएको बेला निरीक्षण गर्ने अफिसर र अन्यजातिबाट ख्रीष्टियन धर्म अङ्गाल्ने पहिलो व्यक्ति कर्नीलियस यही दर्जाका अफिसर थिए। पावललाई कोर्रा लगाइँदा निरीक्षण गर्न खटाइएका र रोमसम्म पुऱ्याउँदा निगरानी राख्ने अफिसर जुलियस पनि सेन्टुरियन नै थिए।—मर्कूस १५:३९; प्रेषित १०:१, फुटनोट; २२:२५ २७:१.
सेन्टुरियन साधारणतया ५०-१०० पैदल सिपाहीको सेना प्रमुख हुन्थे। सेन्टुरियनको काममा सिपाहीहरूलाई तालिम र अनुशासन दिने, तिनीहरूका लुगा र सरसामान ठीक अवस्थामा छन्‌ कि छैनन्‌ भनी निरीक्षण गर्ने अनि सेना परिचालन गर्ने जस्ता कुराहरू समावेश हुन्थ्यो।
साधारण सिपाहीले हासिल गर्न सक्ने सबैभन्दा ठूलो दर्जा भनेको नै सेन्टुरियन थियो। यो दर्जा स्थायी सिपाहीहरूले मात्र हासिल गर्न सक्थे। साथै तिनीहरूमा राम्रोसँग नेतृत्व लिन सक्ने क्षमता पनि हुनुपर्थ्यो। रोमी सेना अनुशासित बन्ने र दक्ष हुने कुरा सेन्टुरियनहरूमै निर्भर हुन्थ्यो। तिनीहरू “सेनासम्बन्धी राम्रो ज्ञान भएका र अनुभवी” हुन्थे भनेर एक स्रोतले उल्लेख गरेको छ।
बाइबलकालीन समयको र अहिलेको ऐनामा के फरक छ?
पुरातन इजिप्टको ऐना
बाइबलकालीन समयका ऐना अहिलेको जस्तो थिएन। त्यतिबेलाको ऐना साधारणतया सुन, चाँदी वा सुनचाँदीको मिश्रण, तामा, काँसा जस्ता धातुलाई टल्काइएर बनाइएको हुन्थ्यो। बाइबलमा बासस्थानको निर्माणको सन्दर्भमा पहिलो चोटि ऐनाको उल्लेख गरिएको पाइन्छ। त्यतिबेला इस्राएली स्त्रीहरूले आ-आफ्ना ऐना तामाको पवित्र धुने भाँडा र त्यसका खुट्टा बनाउन दिएका थिए। (प्रस्थान ३८:८) यी सामग्री बनाउन ऐनालाई पगाल्नु परेको हुनुपर्छ।
इस्राएल र त्यसको वरपर उत्खनन गर्दा गहना र अन्य सिङ्गारपटारका कुराहरूसँगै ऐनाहरू भेट्टाइएको थियो। ती ऐना गोलो आकारका थिए र त्यसका िबँड काठ, धातु वा हात्तीको दाँतले बनाइएको थियो। िबँडमा बुट्टाहरू कुँदिएका थिए। तर ऐनाको पछाडिको भागमा भने कुनै बुट्टा थिएन।
अहिले सिसाबाट बनाइएको ऐनामा हामी स्पष्ट देख्न सक्छौं। तर त्यतिबेलाको ऐनामा भने यसरी स्पष्ट देखिन सकिंदैन थियो। त्यसैले प्रेषित पावलले यसो भन्नुको अर्थ हामी बुझ्न सक्छौ: “अहिले हामी धातुको ऐनामा हेरेजस्तो धमिलो छाया मात्र देख्छौं।”—१ कोरिन्थी १३:१२.
के तपाईंलाई थाह थियो?—अप्रिल २०१५